Welding ndiyo nzira yekubatanidza huso hwepamusoro nekunyorova iwo nekupisa. Kana uchitema thermoplastics, chimwe chezvinhu zvakakosha ndicho chinhu chaicho. Kwenguva yakareba seyimbi yepurasitiki yave iripo vanhu vazhinji vachiri kusanzwisisa izvo zvakakosha, izvo zvakakosha kune chaiyo weld. Nhamba iri pa ...
Polyethylene pombi masisitimu ave achishandiswa nevatengi vedu kunwa mvura kubva pakuunzwa kwavo muma1950. Indasitiri yepurasitiki yatora mutoro mukuru mukuona kuti zvigadzirwa zvinoshandiswa hazvikanganise mhando yemvura. Mhando yemiedzo yakaitwa pamapapa ePe ...
Unhu hunoita kuti mapaipi eHDPE akodzere mhinduro dzemvura
Mapaipi eHDPE ane hunhu hwakati wandei hunoita kuti ive chinhu chakakodzera kukwikwidza chekufambisa mvura. Kubva pakuvigwa kwakananga, kutsvedza-mupendero wepombi iripo kune yakatwasuka nzira yekuchera, simba rekubatanidza pombi yeHDPE uye ductility-refu inoita kuti ive yakakodzera kune vazhinji kumisikidza te ...